Uncategorized – Page 61 – Shabakadda Amiirnuur
Al-Shabaab oo Madaafiic Ku Duqeysay Amisom-ta Heysata Awdheegle Iyo Askarta DF ee La Joogta.
Guutada madaafiicda ee Xarakada Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay duqeysay xeryaha ay deggan yihiin ciidamada shisheeye ee qabsaday Awdheegle iyo askarta DF, ee la joogta. Dadka ku dhaqan tuulooyinka ku dhow Awdheegle ayaa inoo sheegay iney maqlayeen hugunka madaafiicda. Duqeynta ayaa labada xero ku socotay qiyaastii saacad barkeed. Sida aan xogta […]
Ilaaliyihii Gaarka Ee Boqoka Sucuudiga o La Dilay.
Wararka ka imaanaya dhulka Xarameynka ayaa ku waramaya in la dilay istaafkii gaarka ahaa ee boqor Salmaan bin Cabdil-Caziiz. Cabdil-Caziiz Al-faqmi oo ahaa sarkaalkii u xilsaarnaa ilaalinta iyo waardiyeynta boqor Salmaan ayaa la sheegay in lagu dilay guri uu lahaa nin ay saaxiibo ahaayeen. Sida ay sheegtay wakaaladda wararka u […]
Meydadka Ciidamo Ka Tirsan Jubbaland oo Maanta Lagu Daawaday Fagaare Ku Yaalla Jamaame.
Degmada Jamaame ee wilaayada Jubooyinka waxaa galabta oo Sabti ahayd lagu soo bandhigay meydadka qaar kamid ah askartii Jubbaland ee shalay lagu dilay dagaalkii ka dhacay tuulada Qaabqaam. Dad badan oo ka kooban qeybaha bulshada islamarkaana xamaasadi ka muuqato ayaa isugu soo baxay fagaaraha kuwaasoo ku faraxsanaa khasaaraha soo gaaray […]
Qarax Sababay Dhimasho Iyo Dhaawac oo Ciidamada DF Lagula Beegsaday Marko.
Magaalada Marko ee gobolka Shabeelaha Hoose, waxaa habeenkii xalay ka dhacay weerar loo adeegsaday qarax kaasoo lala beegsaday askar ka tirsan kuwa DF, oo ku jiray qayilaad iyo dhageysiga heeso qalaad. Faahfaahin dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa weerarkan oo dhacayay xilligii fiidkii, kadib markii qiiq iyo uuro is heysta ay […]
Itoobiya oo Marti Galisay Shir Looga Hadlayo Ka Faa’iideysiga Kheyraadka Soomaaliya!!
Dalka Itoobiya ayaa waxaa lagu soo gunaanaday shir lagu lafa gurayay sida looga faa’iideysan karo kheyraadka dalka Soomaaliya, iyadoo lagu marti galiyay xubno ka socda golayaasha DF, iyo dad kale oo ajaanib ah. Shirka oo si gaar ahaaneed uga dhacay magaalada caasimadda ah ee Adis-ababa, ayaa waxa uu socday muddo […]
Dhageyso: Ergay Wax Kasoo Doortay Xildhibaanada Jubbaland oo Hadal Saamayn Leh Ka Jeediyay Bu’aale.
Mid kamid ah ergadii soo dooratay xildhibaanada Jubbaland ayaa hadal saamayn leh ka jeediyay munaasabad ka dhacday magaalada Bu’aale ee xarunta gobolka Jubada Dhexe. Nabadoon Deeq Cabdi Rayid oo kamid ah ergooyinkii ka faa’iideystay cafiska ay u fidiyeen Al-Shababa, ayaa sheegay markii hore uusan xaqiiq badan ka heyn arrimaha la […]
Dhageyso In Ka Badan 30 Isbaaro oo Jubbaland U Taalla Inta U Dhaxaysa Kismaayo Iyo Baar-sanguuni.
Dadka ku safra wadada xiriirisa magaalada Kismaayo iyo degaanka Baarsanguuni ayaa waxay aad ugu dhib qabaan isbaarooyin kor u dhaafay 30 oo halkaasi u yaalla ciidanka Jubbaland. Nabadoon Cumar Cismaan oo kamid ah odayaasha Jubada hoose ayaa sheegay inuu dhawaan safar ku maray inta u dhaxaysa Kismaayo iyo Baar-sanguuni islamarkaana […]
Itoobiya oo Walaac Ka Muujisay Awooda Xarakada Al-Shabaab.
Madaxweynaha dalka Ethiopia Sahle-Work Zewde oo ka hor hadleysay shirka Qaramada Midoobay ee Magaalada New York ayaa warbixinteeda kusoo hadal qaaday dalka Soomaaliya gaar ahaan xaaladda DF, iyo arrimo kale oo la xiriira. Haweeneydu waxay sheegtay in DF, ay guulo ka gaartay dhismaha hey’adaheeda, dhaqaalaha iyo arrimaha doorashooyinka. “Soomaaliya waxa […]
Degdeg: Ku Dhawaad 10 Askari oo Ka Tirsan Ciidanka Jubbaland oo Lagu Dilay Duleedka Kismaayo Hubkiina Laga Furtay.
Duleedka magaalada Kismaayo waxaa maanta ka dhacay weerar hubeysan oo ay qaadeen ciidamada Al-Shabaab, kana dhan ahaa askar ka tirsan kuwa Jubbaland. Weerarkan ayaa ka dhacay tuulada Qaamqaam oo dhacda duleedka magaalada. Wararka halkaa naga soo gaaraya ayaa waxay sheegayaan in ciidanka Jubbaland halkaa lagu gaarsiiyay khasaare badan oo dhimasho […]
Suldaanka Beesha Tunni Ee Jubooyinka oo Geeriyooday. (Sawirro)
Alle ha u naxariisto’e, waxaa magaalada Jilib maalintii shalay ku geeriyooday Suldaankii beesha Shan-Gamaas ee Jubooyinka, Suldaan Ibraahim Aadan Ibraahim, kaasoo si weyn looga garanayay gobolka oo dhan. Suldaan Ibraahim ayaa muddo aad u dheer ahaa Suldaan kaasoo wax badan oo wanaag ah u hor seeday beeshiisa. Wuxuu ahaa nin […]